नागरिककाे सामान्य समस्या पनि समाधान गर्न नसकेकाे गुल्मीकाे मुसिकाेट नगरपालिका ! - Kaiphiyat
Home विविध नागरिककाे सामान्य समस्या पनि समाधान गर्न नसकेकाे गुल्मीकाे मुसिकाेट नगरपालिका !
२०७८ अशोज ९ गते
विपिन विश्वास रायमाझी, गुल्मी । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार राज्यको पुनरसंरचना हुदा ७ प्रदेश ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानिय तह बिभाजन भए अनुसार गुल्मी जिल्लाका साविकका ८ गाविस समेटेर स्थापना गरिएको मुसिकोट नगरपालिका लुम्बिनी प्रदेशमा पर्दछ ।
वडागत यातायात कुनैपनी वडामा जाने बाटो पक्की हुन सकेको छैन
विगत चार वर्षमा लाखौ लगानी भएको छ ती समुदायमा तर चेतनाको स्तर उस्तै छ। अपवाद बाहेक अझै उनिहरुलाई किन्न सकिन्छ, पैसामा आफ्नो बनाउन सकिन्छ, भन्ने सोचमै र दाउमै प्रतिनिधिहरु छन यस्को उदाहरण प्रत्येक वडामा देख्न सकिन्छ । उपेक्षित दलित समुदायमा न बालबिवाह रोकियो? न जाडरक्सी रोकियो? न शैक्षिक सुधार भयो? न बालश्रम शोषण रोकियो?
कैफियत - २०७७ फाल्गुन १६ गते 0
काठमाडाैँ । प्लेनमा बच्चा जन्मियो भने उक्त बच्चाले कुन देशको नागरिकता पाउला त ? यो हामी सबैको दिमागमा घुमिरहेको प्रश्न हुनसक्छ । तर, कतिपयले भने...